'Bvudzi Rakashata' Director Justin Simien muTalks yeiyo nyowani 'Haunted Mansion' Firimu
musha Horror Varaidzo Nhau 'Bvudzi Rakashata' Director Justin Simien muTalks yeiyo nyowani 'Haunted Mansion' Firimu
Deadline arikuzivisa kuti Justin Simien (Bvudzi Rakashata) iri muhurukuro kutungamira firimu idzva rakavakirwa pamufananidzo Haunted Mansion kukwezva.
Disney akambogadziridza kukwira kuita firimu yakatarisana naEddie Murphy kumashure muna 2003. Murphy akatamba semumiriri wezvivakwa anozviwana abatwa mukati meimba isinganzwisisike pamwe nemhuri yake. Iyi firimu yakaitiswa zvine mwero pahofisi yebhokisi, kunyange iine diki asi yakatendeka chitendero chinotevera nanhasi.
Chinyorwa chitsva chemufirimu chazvino chakanyorwa naKattie Dippold (Kupisa), uye vekunze veDisney vakataura pachena kuti ichazvimira yega pasina hukama neyakagadziriswa yapfuura inova chinhu chakanaka kuna Simen kana chero mutungamiriri anopedzisira atora chirongwa ichi.
Ivo Vanotambudzwa Imba yanga iri mainstay kuDisney Parks kubvira payakatanga kuratidza kumashure muna 1969. Rwendo rwacho runotora vashanyi parwendo runopenga kuburikidza neimba isinganzwisisike kwavanosangana vakatarisana nezviratidzo zvakasiyana siyana zvemweya uye zvinokatyamadza.
Simien akatanga kupaza achienda pachiitiko nefirimu rake Vadiwa Vatsvene kumashure mu2014. Iyo firimu yakahwina mibairo mizhinji inoonekwa mumitambo ine mukurumbira seSundance. Kuzivikanwa kwaro kwakatungamira kune yakateedzana kuchinjika paNetflix iyo yave kusvika kumhanya kwayo mushure memwaka mina. Simien akatevera kubudirira ikoko ne Bvudzi Rakashata, comedy inotyisa iyo yakawana kutarisisa kwakawanda kubva payakaburitswa uye inogona kuonekwa parizvino paHulu.
Izvo chete izvo zvitsva izvi zvinoenderana Haunted Mansion zvinotaridzika senge, hatigone kutaura, asi isu tichakuchengeta iwe unyore pane chirongwa chinokura.
Kana, seni, usati wamboenda kune imwe yeDisney Parks (Nyika, Nyika, kana zvimwewo), unogona kutarisa vhidhiyo pazasi kuti ufambe-uzere Haunted Mansion kukwezva!
kwadzakabvaDisneyhaunted mansionjustin simienWaylon Jordan
Nakidzwa neSavage Yekutanga Maminetsi manomwe e'Mortal Kombat 'Pano Pano, Izvozvi